Semalt Expert: Nei Kutamba Kwepamberi Kunowanikwa?
Kubiridzira kwepaIndaneti kwakave kutyisidzira kukuru kumhizha e-commerce. Kazhinji,webmasters vanoziva nezvezvipingamupinyi zvekubiridzira pavanowana chekubhadhara chekutanga. Kunyange zvazvo iyo nzira yekubiridzira inowanikwa munzvimbo dzakawandayenyika, U - computer repair services newark ca.S inotakura mutoro wezhinji kurasikirwa kubva paIndaneti scams.
Inonyengeri yeIndaneti inowanzoenderana nezvikonzero zvakasiyana-siyana. Max Bell, Mutungamiri Wekubudirira Kwevatereji Semalt ,yakagadzirisa zvinhu zvinonyanya kukosha zvekubiridzira nechinangwa chokukubatsira kutarisana nekurwisa.
Yakabiwa kadhi rechikwereti chekwereti iri nyore kutenga. Inonyengeri haisi yepamusorodambudziko pamatongerwo emitemo yekuchengetedza mitemo nokuti kuunganidza humwe uchapupu uye hupfumi hwekutonga nyaya dzakadaro zvakaoma. Sezvo amugumisiro, kupomerwa hakunakwanisi.
Kubiridzira kwekambani kunoshanda sei
Mashoko ekadhi rechikwereti akabiwa nevapanduki vega yega kana network yakawandayevashandi vanocheka.
Kazhinji, vanhu vanovhundutsa kana vashandi vezvemhosva vanorwisa mabhizimusi nemasanganokuti uwane chero mafiro ehupfumi kana ega ega. Kana vachinge vawana data inofanirwa, vanoitengesa iyo mumusika. Iyo inowedzera datavatengesi vane kadhi, uye yakakosha mutengo wemashoko pamusoro pemusika.
Data yakabatwa inotengeswa kune rimwe mutatu.
Nyaya zhinji, vanhu vanoba mari yega kana yezvemari havakwanisivanhu vanoshandisa ruzivo. Kazhinji, iyo yakakura kukurwisa, zvishoma zvishoma hack initially inogona kushandisa data kuti iite unyengeri.
Vanyengeri vanoedza uye vanopedza kadhi.
Apo vanyengeri vanowana dhidhi kadi yedata, vanoparadzanisa makadhi anoshingaira kubva pakuperamakadhi. Kuti uzive kana kadhi iri kushanda, vanyengeri vanoita zvishomanana kutenga paIndaneti. Kana mutero wacho uchibudirira, anotanga kunetakadhi rechikwereti.
Zvichienderana nehuwandu hwe data huckers mune yavo, vanogona kudarikasevatenzi vemakadhi chaiwo uye kunyange kutema mafaira ekutsvaga muInternet pamutambo wavo.
Nei kushungurudzwa kwekwenyengeri kusina kuwanikwa
Kuunza vanokuvadza kuverenga kunowanzova kukwira mumuganhu nokuda kwezvikonzero zvakawanda. Kutanga, aOngororo inofanira kuyambuka nyika uye miganhu yenyika yose inokonzera zvinetso zvemhosva.
Chechipiri, kuunganidza uchapupu hwekutsvaga paIndaneti nguva dzose kunonetsa. Munhu anonyengera uyoanonyora muchengeti wemakadhi anyoresa kero ye email uye anokwereta bhokisi remakadhi pasi pezita risina nhema. Izvi zvinosiya uchapupu hushomanana hwekubatanidzamhosva yacho kumutengesi. Somugumisiro, masangano ekuchengetedza mitemo angave asina uchapupu hwakakwana hwokupomera mhosva.
Mukuwedzera, e-zvekutengeserana utsotsi zvinowanzoonekwa sechinetso chakakosha.Izvi ndechokuti mavhareji emari yemba inobirwa inowanzopera. Panguva imwecheteyo, munhu anenge atambura angasave achida kutevera mutengesikunyanya kana muridzi wekadhi anovimbiswa yekuwana mari yebhangi yakabudisa kadhi. Uye kana iwe uchienzanisa muvharejimari yakawanda e-commerce nzvimbo dzinokanganisa nekunyengedzera kumatambudziko eFBI nedzimwe nhengo dzezvemitemo dzinokurukura panzvimbo dzavo, unotangakuti anzwisise kuti sei e-yekutengeserana kwenhema ndiyo inonyanya kukoshesa masangano aya. Chaizvoizvo, haisi iyo masangano akadai seFBIkusazvidza maitiro akadaro, pane zvavanenge vasina huwandu hwemabasa ekutsvaga avo vanoita zvepayeri.